Nepali – Telly's Photos
प्रत्येक एकल कम्प्यूटर प्रविष्टिको लागत $ 15 हो: प्रति फोटो अमरीकी डालर
तस्बिरहरूको सेटहरू प्रविष्ट गर्न सकिन्छ
मोबाइल फोन प्रविष्टिहरूको लागत $ 2: USD प्रति फोटो हो
असीमित प्रवेश मात्रा सबै वर्ग र उपकरणहरूमा।
यी प्रतियोगिताहरूको अन्तिम म्याच 21 जनवरी, 2018: 11.59बजे हङकङको समय हो, सबै प्रतियोगिताहरू3क्यालेन्डर महिनाका लागि दौडिन्छन्।
सबै नगद पुरस्कारहरू सबै भन्दा उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तान विधि मार्फत भुक्तान गरिनेछ। सम्झनुहोस्, यो क्यामेराको बारेमा छैन, यो फोटोग्राफरको बारेमा होइन, यो विषयको बारेमा होइन, यो क्षण हो, यसलाई खिच्नुहोस्! सोच्नुहोस्! यसलाई बुझाउनुहोस्!
प्रविष्टिहरू समावेश गर्नुपर्छ
नाम, इ-मेल ठेगाना, तपाईंले प्रविष्ट गर्नुभएको प्रतियोगिताको शीर्षक, यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने तपाईंको देशको भाषा प्रयोग गर्नुहोस् र कलाको तपाईंको क्षणमा हामीलाई केहि जानकारी दिनुहोस्।
हाम्रो सबै प्रतियोगिहरु सबै भाषाहरु को लागी खुला छ, सबै उमेर को सबै राष्ट्रीयताहरु सबै सपनाहरु र सबै विश्वासीहरु। जीवनको रूपमा हाम्रो वरपर जीवित रहन्छ यसले यसलाई सुरक्षित र यसलाई प्रस्तुत गर्दछ! हामी शहरी जंगहरु र निर्बाध ग्रामीण रोमरहरु को शिकारीहरू हो, हाम्रो ट्राफिक अनमोल डिजिटल सम्झौताको वा चाँडै पेंसिल कृतिहरू हुन्।
हामीलाई प्रेरित गर्नुहोस्
यस प्रतिस्पर्धा साइटमा तपाइँसँग न्यायाधीशहरूलाई प्रभाव पार्न3तरिकाहरू छन्।
हेर्नुहोस्, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्।
1) हामी वर्तमानमा हामी कलाको आगमनबाट आउछौं कि हामी पर्यटन, प्राकृतिक सुन्दरता, अयोग्य ऊर्जा, जीवन रगत, म्याक्रो चमत्कार, शुद्ध निर्दोष वा यस संसारको कठोर रवैया हेर्न चाहन्छौं।
महसुस गर्नुहोस्, हामीलाई महसुस गर्नुहोस्
2) हामी सर्तको विन्डोमा हाम्रा दिदीहरू जस्तै बिस्तारै हराउँदछौं र सँगी फोटोग्राफरहरू र कलाकारहरूको रूपमा, हामी अचम्मको उत्तेजित हुन चाहन्छौं, किनकी तपाईंले त्यो क्षणको वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ सधैँ फ्रिज गर्न चाहानुहुन्छ कि एकल। हामीलाई भन्नुहोस् किन यो छवि अरूको निरीक्षण गर्ने कलाको संग्रहको भाग हुनुपर्छ, र यसले कसरी “सबैलाई यो सदाको लागि पृथ्वीमा कहिल्यै सिक्न कहिल्यै” भन्ने सबै विशाल प्रभावहरू देखाउँछ।
सुन्नुहोस्, हामीलाई कुरा गर्नुहोस्
3) हाम्रो श्वासको बीचमा भित्ता घुमाईन्छ, हामी हँसिलो वा अचम्मको कारणमा सुन्न चाहन्छौं। हामी पुरानो ज्वालाको जुनसुकै साथमा हाम्रा भावनाहरूमा लेख्दछौं। हामीलाई आवाज दिनुहोस् कि क्षण, क्यामेरा र वातावरणको समक्रमण। तपाईंको फोटोग्राफिक क्षमताहरूसँग संसारलाई प्रभाव पार्न यो ठूलो मौका, र यद्यपि एक तस्वीरले कहिलेकाहीँ तपाईंले आफ्नो 600 मेगा पिक्सेलको आँखाको साथ देख्नुभयो भनेर देखाउँछ। हामीलाई तपाईका शब्दहरूको सञ्झ्याल सिर्जना गर्न आवश्यक छ जसले हामीलाई सक्षम पार्छ, जस्तो कि तपाईले सोच्नुभयो। जस्तो कि तपाईले गरे जस्तै, तपाईंले गरे जस्तै छुनु भएको छ र तपाईले गरे जस्तै सुन्न।
न्यायाधीशहरू प्रभावित हुने प्रतीक्षा गर्दै छन्, हाम्रा न्यायाधीश मानवहरू हुन्। त्यसैले हामी तपाइँलाई हवामा उत्कृष्ट दिन चाहन्छौं, हामी तपाईंका पेश्कीहरू प्राप्त गर्न साँच्चै सम्मानित हुनेछौं।
हाम्रो उद्देश्य फोटो प्रतिस्पर्धाहरू प्रदान गर्ने छ जुन सीमाहरू तपाईंको उपकरणको गुणस्तरको निर्धारण गर्दैन, वा भौगोलिक रूपमा Bokeh पृष्ठभूमिमा लानु हुँदैन।
हामी हृदय-वार्मिंग, उत्थान, प्रेरणादायक, प्राकृतिक तस्वीरहरु, फोकसहरू जो हामीलाई रोक्न र सोच्न को लागी फोकस गर्न चाहानुहुन्छ, यो कसरी धेरै उत्साहजनक, अझै नाटकीय मासु र रगत संसारको भाग हो।
हामी फोटोहरू हेर्न चाहन्छौं जसले हामीलाई प्रेरित गर्दछ कि हाम्रो क्यामेरा पनि बाहिर निकाल्न र बाहिरका साना खतराहरू लिनुहोस् जुन पछि अरूलाई प्रेरित गर्दछ। हामीलाई फोटोहरू फोटोग्राफरसँग सम्पर्क गर्न चाहानुहुन्छ र “राम्रै काम” भन्नुहोस् तपाईंको छविमा शक्तिशाली आवाज छ।
हामी तिनीहरूलाई सुन्दर किताबहरूमा राख्न र तिनीहरूलाई फिर्ता पठाउन चाहन्छौं ताकि तपाईंको कलाको शान्ति सधैँ कफी मेजमा बस्छ।
त्यसैले केहि चीजको अंश हो जसले तपाईंलाई आफैलाई धक्का पुर्याउँछ, अतीतमा “म चाहन्छु” एक बन्ने “म हुँ”
यदि तपाईं यस पृष्ठमा आउनुभयो र यो तपाईंको मूल भाषामा होइन, र तपाईले अनुवाद गर्नुमा रुचि राख्नु भएको छ कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईसँग पद्धतिहरू छलफल गर्न प्रसन्न हुनेछौं, हाम्रो उद्देश्य हरेक सम्भव भाषामा यो तस्वीर प्रतिस्पर्धा छ। कलाको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारलाई विश्वास गर्नुहोस् एक निर्वाहिक स्रोत हो।
हामीलाई परिवर्तन गर्न विश्व सामुदायिक सहयोग चाहिन्छ।
बिना सीमाहरु प्रतियोगिता।